အသက်မပြည့်သေးတဲ့ တပည့်တွေကို အိမ်ခေါ်ပြီး အိပ်လို့ ထောင်ကျတော့မယ့် ဆရာမ - HARTHANANTAW
အသက် 17 နှစ် ကျောင်းသားနှစ်ယောက်၊၊ 16 နှစ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်တို့ကို အိမ်ခေါ်ပြီး အ၀ှါဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် အန်ရင်း လို့ အမည်ရတဲ့ ဆရာမကို ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအက် ဥပဒေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
ကျောင်းမှတာဝန်ခံကျောင်းဆရာတစ်ရဲ့ တိုင်ကြားချက်မှာ သင်္ချာဆရာမ အန်ရင်းက အသက် 17 နှစ် ကျောင်းသားနှစ်ယောက်၊၊ 16 နှစ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်တို့ကို အလဲ့ကျ ခေါ်ပြီး အ၀ှါဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့ တိုင်းကြားထားပါတယ်။ စုံစမ်းစစ် ဆေးရေး ဘုတ်အဖွဲ့က ဆရာမကို ကျောင်းသားသူငယ်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း ဥပဒေ (3) ခု၊ အခြား ကျောင်း သားတစ်ဦးအား မဖွယ်မရာ ပြုမူမှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် …. ။
ဆရာမ ဟာ အမေရိကန် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့နေတာဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုတွေသာ ခိုင်လုံပါက ဆရာမဟာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ကျခံရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်များနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ လူသတ်မှုကဲ့သို့ ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်ပါတယ် …. ။
အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ တပညျ့တှကေို အိမျချေါပွီး အိပျလို့ ထောငျကတြော့မယျ့ ဆရာမ
အသကျ 17 နှဈ ကြောငျးသားနှဈယောကျ၊၊ 16 နှဈကြောငျးသား တဈယောကျတို့ကို အိမျချေါပွီး အဝှါဆကျဆံခဲ့တဲ့ အသကျ ၂၅နှဈအရှယျ အနျရငျး လို့ အမညျရတဲ့ ဆရာမကို ကလေးသူငယျလိငျပိုငျးဆိုငျရာအကျ ဥပဒနေဲ့ သကျဆိုငျရာက ဖမျးဆီးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
ကြောငျးမှတာဝနျခံကြောငျးဆရာတဈရဲ့ တိုငျကွားခကျြမှာ သခငြ်ျာဆရာမ အနျရငျးက အသကျ 17 နှဈ ကြောငျးသားနှဈယောကျ၊၊ 16 နှဈကြောငျးသား တဈယောကျတို့ကို အလဲ့ကြ ချေါပွီး အဝှါဆကျဆံခဲ့တယျလို့ တိုငျးကွားထားပါတယျ။ စုံစမျးစဈ ဆေးရေး ဘုတျအဖှဲ့က ဆရာမကို ကြောငျးသားသူငယျနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကြူးလှနျခွငျး ဥပဒေ (3) ခု၊ အခွား ကြောငျး သားတဈဦးအား မဖှယျမရာ ပွုမူမှုနဲ့ စှဲခကျြတငျခဲ့ပွီး၊ ရဲတပျဖှဲ့ကလညျး ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခဲ့ပါတယျ …. ။
ဆရာမ ဟာ အမရေိကနျ မွောကျကယျရိုလိုငျးနား မှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့နတောဖွဈပွီး ပွဈမှုတှသော ခိုငျလုံပါက ဆရာမဟာ နှဈရှညျထောငျဒဏျ ကခြံရဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ အမရေိကနျနဲ့ ဥရောပ နိုငျငံတှမှော အရှယျမရောကျသေးတဲ့ ကလေးသူငယျမြားနဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ လူသတျမှုကဲ့သို့ ပွဈမှုကွီး ဖွဈပါတယျ …. ။